Ireo archetypes marika 12: iza ianao? | Martech Zone
Mila fanarahana tsy mivadika isika rehetra. Izahay dia mitady hatrany ny drafitra marketing mahagaga izay hampifandray antsika amin'ny mpihaino anay ary hahatonga ny vokatray ho ampahany tsy azo soloina amin'ny fiainany. Ny tsy takatsika matetika dia ny fifandraisana dia fifandraisana. Raha tsy fantatrao tsara hoe iza ianao, dia tsy misy olona liana aminao. Zava-dehibe ny fahazoanao ny marikao, ary ny fomba tokony hanombohanao fifandraisana amin'ireo mpanjifanao.
Misy mari-pahaizana fototra 12 — na archetypes— Marika iray afaka mandray. Etsy ambany, notapahiko daholo ireo 12 mba hanampiana anao hahafantatra hoe aiza no misy anao:
Ny MAGICIAN dia manatanteraka ny nofy - Ny archetype Magicien dia miresaka fahitana avokoa. Ny marika majia dia tsy manamboatra borosy nify tsara kokoa ho anao na manampy anao hitandrina ny tranonao hadio; mamelona ny nofinofisinao izy ireo. Ny zavatra aroson'izy ireo dia traikefa lehibe tsy misy olon-kafa mety hahatratra. Ny mpanao majia dia mifanaraka tanteraka amin'ny fototr'izao rehetra izao ka afaka mamorona ny tsy vita. Disney no mpanao majia tonga lafatra. Orinasa fampahalalam-baovao i Disney amin'ny ankapobeny, saingy tsy mitovy amin'ny an'ny hafa izy ireo. Manolotra traikefa fanovana izy ireo. Izy ireo dia ao amin'ny sokajy misy azy manokana noho ny halehiben'ny fahitany. Alao an-tsaina ny marika iray hafa mety hanangana a Fanjakan'ny majika na ny World Disney.
Ny SAGE dia mitady ny marina foana - Ho an'ny olon-kendry, ny fahendrena no lakilen'ny fahombiazana. Ny zavatra hafa rehetra dia miankina amin'ny fikatsahana fahalalana. Ny marika hendry dia mety tsy hahatsapa ho mafana sy malina. Tsy mampiditra anao amin'ny tontolo mahafinaritra toa an'i Disney izy ireo. Fa kosa, ny hendry dia mibaiko ny fanajanao amin'ny fampisehoana ny famirapiratany. Olon-kendry ny oniversiten'i Harvard. Iray amin'ireo oniversite hajaina indrindra eran'izao tontolo izao izy ireo. Mirehareha amin'ny lisitr'ireo alumni izay misy filoham-pirenena amerikana valo, nahazo loka Nobel 21, ary Mark Zuckerberg (karazana), ny marika Harvard dia ny maha-mahay indrindra azy indrindra.
Ny INNOCENT dia te-ho faly fotsiny - Ao amin'ny paradisa ny tsy manan-tsiny. Malalaka, mendrika ary sambatra ny tsirairay eo amin'ny tontolon'ny tsy manan-tsiny. Ny marika tsy manan-tsiny dia tsy hanome tsiny anao amin'ny doka mihitsy na handeha any an-tampony handresy lahatra anao. Fa kosa, ny marika tsy manan-tsiny dia hanintona anao amin'ny zavatra matanjaka kokoa: Nostalgia. Orville Redenbacher no archetype tsy manan-tsiny prototypical. Amidin'izy ireo aminao ny fikolokoloana zaza, popcorn, ary ny mascot-dry zareo dia raibe iray izay tsy nitsahatra ny nifalifaly hatramin'ny naha-sandoka azy ireo.
Ny OUTLAW dia mila revolisiona - Tsy matahotra ny Outlaw. Ny marika tsy manara-dalàna dia mifehy ny fiainany tsy misy fiheverana ny satan'ny quo. Izay misy ny archetype tsy manan-tsiny mikasika ny ampahany aminao izay tia fotoana fihinanan-tsakafo any amin'ny akanin-jaza, ny archetype tsy ara-dalàna dia manintona ny ampahany aminao izay manapaka kilasy amin'ny lisea. Ny fananganana antokom-pivavahana manaraka toa an'i Apple no tanjona faratampon'ny marika tsy ara-dalàna. Tadidinao ireo dokambarotra iPod taloha izay nahitan'ny olona monochrome fotoana tsara indrindra tamin'ny dihy? Tsy milaza aminao ny dokam-barotra hijoroana vahoaka na handeha amin'ny kaonseritra. Milaza aminao ny tenanao, mandihiza isaky ny tianao, ary ataovy amin'ny Apple. Raha mieritreritra ianao fa tsy manana antokom-pivavahana i Apple dia diniho ity. Niandry ny filaharana nandritra ny ora maro ve ny olona rehefa navoaka ny Galaxy S7? Tsia, ny valiny.
Miaina amin'izao fotoana izao i JESTER - Ny Jester dia resaka fialamboly daholo. Ny marika Jester dia mety tsy manasitrana aretina, saingy manatsara ny andronao izy ireo. Ny hatsikana, hadalana, eny fa na dia tsy misy dikany aza dia ao anaty fitaovan'i jester daholo. Ny tanjon'ny marika jester dia ny hampitsiky anao amin'ny fahafinaretana maivana. Ny Old Spice Man dia iray amin'ireo fampielezana doka tiako indrindra ary ohatra tonga lafatra amin'ny archetype jester. Misy bandy mihetsika tsara amin'ny mari-pahaizana hyper-maskulin. Ny bandy hafa kosa tsy. Amin'ny fanaovana vazivazy amin'ireo marika tena mahery vaika ireo, Old Spice dia nahasarika ny roa tonta.
Ny FITIAVANA dia te-hanao anao ho azy ireo - Ny filana, ny fahafinaretana ary ny filan'ny nofo no teny lakilen'ny olon-tiana. Ny marika tia dia te hampifandray azy ireo amin'ny fotoana akaiky eo amin'ny fiainanao. Inona no vidinao hankalazana azy? Inona no hividiananao ny iray hafa manan-danja amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana sy tsingerintaona? Mety ho anao, mividy marika marika fitiavana ianao. Eritrereto ny doka Chocolate Godiva. Moa ve izy ireo manentana anao hieritreritra ny fahasalamanao, ny volanao, na ny hoavinao? Tsia. Godiva mamitaka anao. Mampiseho ny hareny sy ny volony izy io. Manasa anao handray anjara amin'ny fanaranam-po amin'ny fiainana lehibe indrindra: Chocolate.
Te handositra i EXPLORER - Ny fahalalahana dia zava-dehibe rehetra tadiavin'ny mpikaroka. Aiza ny marika hafa mety manandrana manampy anao amin'ny fananganana trano, ny marika mpikaroka dia te hamoaka anao any ivelany. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia misy dikany fa marika ivelany dia marika mahazatra voajanahary ho an'ny archetype mpikaroka. Subaru no marika Explorer mahazatra. Tsy mivarotra ny fiarany miorina amin'ny haitraitra na fampiononana izy ireo; asongadin'izy ireo ny fahalalahana omen'i Subaru. Tsisy olana. Mamela anao hanapa-kevitra ny amin'izay alehanao i Subaru, na inona na inona toe-javatra misy anao. Afaka ianao.
Ny fahefana dia mila fahefana tanteraka - Ny haitraitra sy ny exclusivité no tena resahina ao amin'ny mpitondra. Ny marika mpitondra dia mpiandry vavahady. Raha mividy amin'izy ireo ny mpanjifa dia mahazo an'ny elit. Ny fahitana azy ho manana kalitao avo lenta sy lafo dia manakiana ny marika mpanapaka. Ny firavaka sy ny fiara avo lenta dia metaly voajanahary ho an'ny archetype mpitondra. Mividy Mercedes Benz ve ianao noho ny isa fanadinana fianjerana? Ary ny mileage entiny? Ny sezany mafana? Tsia. Mividy Mercedes-Benz ianao satria zakanao izany, ary ny ankamaroan'ny olon-kafa tsy afaka. Isaky ny mametraka ny fiaranao ianao dia ho takatry ny olona ny momba anao nefa tsy miteny na dia iray aza ianao. Io sanda takatra mangina io dia amidin'ny marika mpanapaka.
Te-hikolokolo anao ny CAREGIVER - Tsara fanahy ilay mpikarakara. Tian'izy ireo ho eo ho anao sy ny olona tianao. Ny marika mpikarakara dia momba ny hafanana sy fahatokisana. Azonao atao ny miantehitra amin'izy ireo rehefa miresaka momba ny zanakao. Mahalana ny mahita marika mpikarakara mihazakazaka doka iray izay mitifitra amin'ny fifaninanana ataon'izy ireo. Mifanohitra amin'ny fifanandrinana izany. Ny tsipika fizarana Johnson & Johnson dia Johnson & Johnson: Orinasa iray ao amin'ny fianakaviana. Tsy afaka manolo-tena bebe kokoa amin'ny fianakaviana ianao amin'izany. Ny doka Johnson & Johnson dia mifantoka hatrany amin'ny fomba hanampian'ny vokatr'izy ireo anao hikarakara ny zanakao. Ahoana ny fomba hananganana fianakaviana ny vokatr'izy ireo. Ity dia mofo-sy-dibera ho an'ny archetype mpikarakara.
Te hanaporofo ny tenany ny HERO - Ny mahery fo dia manatsara an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny maha-tsara indrindra azy. Ny marika mahery fo dia tsy miahiahy amin'ny fikolokoloana anao; liana amin'ny fanamby anao izy ireo. Raha te-hisondrotra amin'ilay fotoana ianao, dia mila vonjy amin'ny maherifo. Ny tafika amerikana dia ohatra faratampony amin'ny archetype mahery fo. Eritrereto ireo dokambarotra fandraisana mpiasa hitanao niaraka tamin'ny tafika nitsambikina avy tamin'ny angidimby, nihazakazaka tamina lalam-piofanana ary niaro ny firenena. Misy itovizany amin'ny andavan'andro anao ve izany? Tsia mazava ho azy. Tsy tokony. Natao hanerena anao hanao izany valio ny antso ary mijoroa amin'ny hetsika amin'ny alàlan'ny fanatevenana marika marika mahery fo: Tafika amerikana.
Te-ho tonga ny REGULAR GUY / GIRL - Tsy misy glitz na glamor, vokatra azo antoka fotsiny izay mahavita ilay asa. Izany no amarotana ny marika lehilahy / zazavavy mahazatra. Ny archetype dia mifantoka amin'ny fanomezana zavatra lavitra be loatra amin'ny fahamendrehana ka mahasarika ny rehetra. Io no archetype mafy indrindra apetraka satria tsy maintsy manana vokatra manintona ny demografika ianao. Misotro kafe daholo. Tsy ny olona tsirairay, fa ny demografika lehibe rehetra, ankoatry ny zaza. Izany no mahatonga an'i Folgers ho marika lehilahy / zazavavy tsara. Folgers dia tsy mivarotra olona marobe. Tsy mirehareha momba ny kafe avo lenta, voajanahary rehetra izy ireo. Notsorin'izy ireo ho tsotra izany: "Ny ampahany tsara indrindra amin'ny fifohazana dia ny Folgers ao anaty kaopinao." Mifoha daholo ny olona. Misotro Folgers daholo.
Ny CREATOR dia maniry fatratra ny fahalavorariana - Ny mpamorona dia tsy manahy ny amin'ny vidin'ny famokarana na ny fanaovana zavatra amin'ny ambaratonga. Miahy zavatra iray izy ireo: ny fananganana ny vokatra tonga lafatra. Na dia manantitrantitra ny fahitana sy sary an-tsaina ihany aza ilay mpanao majia, dia tsy mitovy ny mpamorona satria tsy manokatra ny majika an'izao tontolo izao izy ireo ary mamorona ny tsy azo atao. Mamorona ny vokatra tonga lafatra izy ireo. Lego dia ohatra tsara amin'ny archetype mpamorona. Tao amin'ny iray amin'ny doka nataon'izy ireo, Lego dia namerina tamin'ny antsipiriany manaitra ireo toerana malaza manerantany. Tsy nanangana tranokala vaovao izy ireo, ary tsy namorona teknolojia vaovao nametraka ireo tranokala tao an-tranonao. Nampiasa ny teknolojia tsotra indrindra azo atao i Lego: blocks. Noraisin'izy ireo izany fahatsorana izany ary natosiny hatrany amin'ny faran'ny tonga lafatra indrindra. Izay no atao hoe mpamorona.
Noho izany, inona ny archetype an'ny marikao?
Nandritra ny traikefa an-taonany maro dia azoko lazaina aminao ny orinasa rehetra tonga eo amin'ny latabatra amin'ny fiheverana fa lehilahy / zazavavy rehetra izy ireo, saingy amin'ny 99% amin'ireo tranga ireo dia tsy izy ireo. Tsy mora ny fandavahana izay mampiavaka ny marikao sy ny fomba fifandraisan'ny mpanjifanao tsara indrindra amin'ny vokatrao, fa io no zava-dehibe indrindra azonao atao mba hahafantarana izay archetype tokony hampiasainao.
Tags: archetypesmarikafamantarana ny marikampikarakarampamoronaDisneytontolo disneympikaroka tany vaovaomahery fotsy manan-tsinyvazivazytiafanjakana majikaodyjiolahytapakampitondraSage